Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Tsy te hahalala krizy sosialy ny mpisehatra pôlitika
INTY SY NDAY: Tsy te hahalala krizy sosialy ny mpisehatra pôlitika
Maresaka indray ny tontolon’ny fifidianana ankehitriny. Mahalasa fisainana ny fihetsiky ny mpilalao pôlitika maro, na any anatin’ny antoko pôlitika izy na any anivon’ny firaisamonim-pirenena sasany any. Zary mirona any amin’io resaka fifidianana io avokoa ny ady hevitra ny mpisehatra pôlitika maro.
Dia ventesina sy resahina hatrany ity hoe “tokony sorohina ny tsy hisian’ny krizy pôlitika aorian’ny fifidianana, ka tokony fifidianana eken’ny rehetra no miseho eto”. Dia tonga hatrany amin’ny hoe “tokony hisy fifanarahana pôlitika mba hifamatoran’ny mpisehatra pôlitika”.
Tena manidina sy misavoana any ambony lavitra any mihitsy izany fomba fijery izany. Satria ve tarigetran’ny fianakaviambe iraisam-pirenena mpanani-bohitra sady mpandroba harena ny hoe “tokony ho fifidianana eken’ny rehetra ary tsy misy fifanilihana no hatao eto mba hisorohana ny krizy aorian’ny fifidianana”, dia revo sy roboka avokoa? Tsy mahagaga satria zary bolokim-bazaha avokoa ny maro amin’ireo mpisehatra ireo, na any amin’ny antoko pôlitika na ireo mialokaloka any amin’ny firaisa-monim-pirenena.
Dia indro koa fa miroso mifanatona sy mifampiresaka amin’ireo antsoina hoe “mpanao pôlitika raiamandreny efa nitondra fanjakana sy mbola amperin’asa, miresaka an’izany ny Komity ho amin’ny fampihavanana Malagasy (Cfm)”.
Dia manontany izahay hoe “inona marina tokoa moa ity krizy ahianareo rehetra ity e?” Satria ve mety hanohintohina ny tombontsoanareo manokana ny mety tsy hahavitan’io fifidianana io noho ianareo rehetra ireo mikarama an’ady eo anivon’ireo mpanani-bohitra vahiny isan-tsokajiny, mba hivarotanareo an’i Madagasikara dia anaovanareo resaka maloto toa izany ny raharaha? Aza hadinoina fa tsy misy tombontsoan’iza na iza ny fisian’ny krizy eto na rahoviana na rahoviana, saingy moa tsy tsapanareo fa mandavan-taona ange ny vahoaka no ianjadian’ny krizy lalina amin’ny fiainana ankapobeny, nefa iza taminareo no mba nijoro, nanao atrikasa, niresaka sy nikaroka ny fomba hamongorana an’izany krizy sosialy sy krizy ara-toekarena mianjady amin’ny vahoaka izany? Ny krizy pôlitika no olana aminareo ka tena fanaovana zinona ny vahoaka potika ny fanamparam-pahefan’ny mpitondra nifandimby teto ny fihetsikareo. Tsy tokony ho gaga ianareo raha ny fijoroan’ny vahoaka hanaisotra na hanilika na hamongotra izao krizy sosialy sy krizy ara-toekarena mila haningotra ny ain’ny vahoaka izao no hialoha lalana ny fifidianana hataonareo. Ary na vita aza io fifidianana io ka hifanaiky fa tsy hamboly na hampiteraka krizy pôlitika ianareo mpilalao pôlitika isany ireo, dia hijoro haneho ny tsy fankasitrahany intsony an’izao krizy soasialy sy krizy ara-toekarena izao ny ambanilanitra, ka lehilahy ianareo mpilalao pôlitika ireo raha hisy havelan’ny vahoaka ho afa-bela eto.
Raha mandeha ara-dalàna sy ara-pahamarinana koa ny zavatra rehetra eto, na fifidianana io na resaka toekarena sy ny sosialy, na inona, tsy ilàna izany fifanarahana pôlitika izany. Tsy hahasakana ny vahoaka tsy hijoro hitaky ny rariny sy ny fahamarinana koa anefa na hisy aza izany fifanarahana pôlitikanareo izany.